“Waxaan dooneynaa inaan ku guuleysano seddex koob xilli ciyaareedkaan” – Luka Modric – Gool FM
(Madrid) 21 Nof 2019. Xiddiga kooxda Real Madrid ee Luka Modric ayaa sheegay inay doonayaan ku guuleysiga dhamaan tartamada kala duwan ay qeybta ka yihiin xilli ciyaareedkan, inkastoo ay qaab liita kaga bilaawdeen kulamada horyaalka La Liga iyo tartanka Champions League.
Waxaa soo fiicnaaday qaab ciyaareedka kooxda Real Madrid ee kulamadii ugu dambeeyay ay ciyaartay, iyagoo gaaray guulo muhiim ah, waxayna hogaaminta horyaalka La Liga kala siman yihiin Barcelona, iyagoo leh min 25 dhibcood.
Sidoo kale kooxda uu hoggaamiyo tababare Zinedine Zidane ee Real Madrid ayaa group-ka A oo ay qeyb kaga tagay tartanka Champions League, waxay kaga jirtaa kaalinta labaad, kaddib markii ay halis u gashay inay harto labadii kulan ugu horeysay.
Haddaba Luka Modric ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay inay doonayaan ku guuleysiga dhamaan tartamada kala duwan ay qeybta ka yihiin xilli ciyaareedkan wuxuuna yiri:
“Waxaan u maleynayaa inaan si weyn u soo fiicnaanay kulamadii u dambeeyay, waxaan qabaa inaan wax ka sii fiican qaban karno, waxaa jira calaamado muujinaya inaan ka soo fiicnaaneyno sidii hore, taasna waa wax lagu farxo”.
“Waa inaan sii wadnaa shaqada si aan u sii fiicnaanaano, xilli ciyaareedka wuu dheer yahay, himilooyinka Real Madrid xilli kasta way iska cad yihiin”.
“Waxaan dooneynaa inaan ku guuleysano koob kasta ee suurtogal ah, sida Copa del Rey, horyaalka La Liga iyo tartanka Champions League”.
“Waxaan isku dayi doonaa inaan guuleysano inta ugu badan ee aan awoodno, iyo in Real Madrid ay ku guuleysato koobab inta ugu macquulsan”.